१८.५३ अंकले घट्यो नेप्से, रू.४ अर्ब ४९ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
२०७८ असोज, २४
असोज २४, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १८ दशमलव ५३ अंक अर्थात् शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ६६२ दशमलव ५८ विन्दुमा पुगेको हो । साताको पहिलो कारोबार दिन कारोबारमा आएका २२० ओटा धितोपत्रको ७२ लाख ५१ हजार ७४४ कित्ता शेयर रू.४ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ४३ हजार बराबरमा खरीदविक्री भएको हो ।
यो दिन कारोबारमा आएका २२० ओटा धितोपत्रमध्ये सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार ७८७ दशमलव ८० पुगेको हो ।
त्यसैगरी मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी यो दिन शेयरमूल्य घट्नेमा सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टको रहेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६ दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ३३२ मा झरेको हो ।
त्यस्तै यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुनेमा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. १८ करोड ९३ लाख ४९ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कम्पनीले ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव आइतवार घोषणा गरेसँगै सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीले ४५ प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश करसमेत गरेर कुल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचकमध्ये वित्त समूहको परिसूचक शून्य दशलमव २९ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसुचक शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ ।
सबैभन्दा बढी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसुचक ३ दशमलव १६ प्रतिशत,बैकिङ समूहको परिसुचक शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत,ब्यापार समूहको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरजिमको १ दशमलव १९ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको १ दशमलव १८ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत,अन्य समूहको १ दशमलव ५९ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको शूून्य दशमलव ८५ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७१ प्रतिशतका दरले घटेको हो ।
यो दिन बजार शुरुमा बढेको थियो । बढेको बजारमा नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ताहरु हावी हुँदा बजार घटेको देखिन्छ । यसभन्दा अघिल्लो कारोबार दिन बुधवार बजार ६८ दशमलव ४७ अंकले बढेको थियो । विभिन्न कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् । यसकारण पनि यो समय लाभांशको सिजन हो ।
राम्रो लाभांश दिइरहेका र वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरुमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले लगानीकर्ताहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिने आवश्यक रहेको एक जना लगानीकर्ताले बताएका छन् ।